Airbus inotarisira 39,000 ndege nyowani
Location: musha » Kutumira » Airlines » Airbus inotarisira 39,000 ndege nyowani
Ngarava dzepasirose uye dzinofamba nendege dzinogadzirirwa zvakapetwa kaviri kubva nhasi anosvika 23,000 kusvika angangoita 48,000 na2038 nemigwagwa inokura pa4.3% pagore, zvichikonzeresawo kudikanwa kwevatyairi vatsva mazana mashanu nemakumi mashanu uye vatyairi vatsva 550,000.
Pakazosvika 2038, pane fungidziro 47,680 yezvikepe, 39,210 vatsva uye 8,470 vasara kubva nhasi. Nekuvandudza zvikepe zvinechizvino-chizvarwa mafuta-anoshanda ndege dzakadai seA220, A320neo Mhuri, iyo A330neo uye iyo A350, Airbus inotenda kuti ichanyanya kubatsira mukufambira mberi kwekugadziriswa kwemabhizimusi ekufambisa emhepo uye chinangwa chekabhoni-isina kwazvakarerekera kukura kubva 2020 uku uchibatanidza vanhu vazhinji pasirese.
Ichiratidzira tekinoroji yanhasi irikushanduka, Airbus yakarerutsa chikamu chayo kuti chione huwandu, huwandu uye mhando yemamishinari. Semuenzaniso, pfupi-dhonza A321 iri Zviduku (S) nepo iyo refu-dhonza A321LR kana XLR inogona kuiswa muboka se Pakati (M). Nepo musika wepakati weA330 unoverengerwa se Pakati (M), zvingangoita kuti nhamba ichaenderera ichishandiswa nendege nenzira inogara mukati me Yakakura (L) chikamu chemusika pamwe neA350 XWB.
Chikamu chitsva ichi chinopa kukwira kwekuda kweane 39,210 vatsva vanofamba nendege dzinotakura zvinhu -29,720 Diki (S), 5,370 Pakati (M) uye 4,120 Yakakura (L) - maererano neAirbus 'yazvino Global Market Forecast 2019-2038. Pakati idzi, 25,000 ndege ndeyokukura uye 14,210 ndeye kutsiva mhando dzekare nedzitsva dzichipa kugona kwakanyanya.
Yakasimba mukukatyamadzwa kwehupfumi, traffic yemhepo yakawedzera zvakapetwa kaviri kubva 2000. Iri kuramba ichiita basa rakakosha mukubatanidza nzvimbo hombe dzevanhu, kunyanya mumisika iri kusimukira uko kuda kufamba kuri pakati pepamusoro soro sezvo mutengo kana jogirafi zvichiita kuti dzimwe nzira dzisakwanisike. Nhasi, inenge kota yevagari vemunyika vane mutoro weinopfuura kota yeGDP yepasirese, uye vachipihwa ese ari maviri akakura madhiraivha ekukura, Aviation Mega Cities (AMCs) ichaenderera mberi nekupa simba kune epasi rese nendege network. Zviitiko zvekukwirisa kwemafuta kuri kuenderera mberi nekutyaira kutsiva ndege dzisingawanike mafuta.
"Iko kukura kwe4% pagore kunoratidzira hunhu hwakasimba hwekufamba nendege, kutonhodza kukatyamara kwehupfumi kwenguva pfupi uye kukanganiswa kwematongerwo enyika. Hupfumi hunobudirira pakufambisa nendege. Vanhu uye zvinhu vanoda kubatana, "akadaro Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer uye Musoro weAirbus International. "Pasi rose, bhizinesi rekufambisa ndege rinokurudzira kukura kweGDP uye rinotsigira hupenyu hwemamiriyoni makumi matanhatu nemashanu, zvichiratidza mabhenefiti akakura anounzwa nebhizinesi redu munharaunda dzese nekutengeserana kwepasirese."
Ndege dzeAirbus vatungamiriri vemusika muzvikamu zvavo. Iyo Zviduku (S) chidimbu chinosanganisira iyo A220 Mhuri uye ese akasiyana eiyo A320 Mhuri. Iyo yepakati Airbus zvigadzirwa mune Pakati (M)chidimbu chiri iyo A330 uye A330neo Mhuri, uye inogona zvakare kusanganisira idiki A321LR uye XLR shanduro dzinoshandiswa pane refu-dhonza mamishini. Chikamu chakakura kwazvo Yakakura (L), inomiririrwa neiyo A330neo Mhuri pamwe chete neiyo hombe A350 XWB Mhuri iyo inosanganisira iyo Ultra Yakareba Range (ULR) vhezheni. Ichi chidimbu chichaenderera kuchishandirwa neA380 kumucheto wepamusoro.
Airbus avhiyesheni mhuri
UAE nhumwa dzinoshanyira nyika dzeEurope pamberi peNyika Tolerance Summit
Ottawa neThe Hague CVB mukubatana kwepedyo
Titanium Di-Oxide Yemusika Wekushandisa Kwekudya 2022...
Zvikwereti Zvemunhu Zvinokanganisa Sei Chikwereti Chako Chibodzwa?
Russia yakamiswa mudare reUN Human Rights Council
Mharidzo yaGurukota Bartlett pamusoro peNyika ye...
Rwanda haichada bvunzo dzePCR kune vatsva vekunze...
GVB inogadzirira kuwedzera kunofungidzirwa kwekufamba kubva ...
Spirit Airlines kuti iongorore isina kukumbirwa nyoro yekupihwa...
Inogona Kufamba Pamhepo Mabhizinesi Kuchinjira kune iyo "Itsva ...
Murwere Wokutanga Akatorwa Kurapa Osteoporosis
Tourism Seychelles Partners neMALT Congress yayo ...
Dzidzo dzepamusoro-soro paIMEX muFrankfurt
Misha 21 muItaly Ichapihwa Hupenyu Hutsva
Costa Rica inorerutsa COVID-19 zvinodiwa zvekupinda kune nyowani ...